Ningbo Sine Magnetic Co., Ltd, yinkampani professional waziphatha Neodymium iimagnethi (NdFeB), Alnico iimagnethi, Samarium ayibe iimagnethi (SmCo), iimagnethi ferrite (iimagnethi yodongwe) kunye nebandla sibubona e Ningbo, China. Siya nikeza lokuqala-class iimveliso esisigxina ngemagnethi.
Siya kucinga zobutsha yaye ungaze umoya, enze yonke into ngononophelo kwaye nzulu. Thina yonke imigudu zibe Imagnethi yomhlaba kunye nolwazi namava iminyaka emininzi kunye. Sisungule fast ukunyuka kule minyaka ili-10 kwaye ziya kuqhubeka siqhubekele phambili.
Umgangatho umphefumlo kwemveliso kunye nobomi lweshishini. Thina rhoqo ukuqeqesha abasebenzi bethu ukuzenza kakuhle kakuhle izakhono zabo. Ngokungqongqo ukwenza i-Quality Management System: ISO9001: 2008, ISO / TS16949: 2009, kunye ISO14001: Imveliso 2004.Advanced kunye nezixhobo zovavanyo ukuqinisekisa iimveliso zethu kunye guquki ophezulu kunye nozinzo eliphezulu. Uninzi lwezixhobo lwethu oluphambili zivela Jamani ne-Japan, ezifana: ICP, kwigumbi HAST, Laser Particle Analyzer njl iimagnethi zethu zingqinelane neemfuno CE, RoHS, SGS kunye Reach umyalelo.
iimagnethi yethu ikakhulu isiko kwenziwa ngokungqinelana neemfuno, iimfuno kunye nokusetyenziswa abathengi. Iintlobo ngeentlobo iimagnethi ungenziwa ngemfuneko ngezinto ezahlukeneyo, ibakala, ukutyabeka, imilo, umlinganiselo, magnetization ulwalathiso, ubungakanani, njalo njalo Singakunikezela iimagnethi e iimilo ezahlukeneyo producible ezifana disc, isangqa, uxande, cube, bar, nesilinda, tile, ingxenye , lamination, isigaba kunye nezinye iimilo ezizodwa. Ngaphezu koko, siya Sele ngempumelelo ubunzima wavelisa iimagnethi isigxina aphezulu amabakala yokusebenza N54,52M, 50H, 48SH, 45UH, 42EH kunye 38AH.
Siye zafumana iziphumo aneendyebo nathi nangona wokukhula inqanaba emarikeni ehlabathi. Siye saseka ubudlelwane zoshishino oluhle kunye nabaxumi ehlabathini lonke. Sikholelwa ukuba siya kuba ngcono ishishini iqabane lakho kwixesha elizayo. Sasikwazi kunibonelela nani iimveliso arcade games kunye xabiso libiza kancinane kwaye inkonzo engcono. Yima ngathi ngxilimbela empumalanga, ibhabhe ngokukhululekileyo esibhakabhakeni enkulu. Sine baya kuhambela phambili gqolo ukuba iqabane lakho kunye amanyathelo yayo yesicwangciso-qhinga jikelele.
Samkela ukuba uqhagamshelane nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga inkampani kunye neemveliso zethu. Siyazama ukwazisa, ukufundisa kwaye ikhuphe imveliso egqwesileyo kunye neenkonzo ezifumanekayo.
Ukukhangela phambili ekusekweni ubudlelwane ishishini kunye nenkampani yakho ebalaseleyo netshatsheleyo.